Iikhilomitha eziyi-300 ukusuka kwiibhanki zaseLoire ngeenyawo - I-Airbnb
Iikhilomitha eziyi-300 ukusuka kwiibhanki zaseLoire ngeenyawo
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguFrederic
Igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela labucala elingaphezulu kwe-22m2 kunye ne-terrace yangasese ye-45m2 kwindlu yamaplanga yanamhlanje kunye nebhedi yangempela kunye nokukwazi ukongeza i-2-seater mattress kunye nomnye. Ixabiso labantu aba-2 lelebhedi enye. Ifumaneka nje i-10mn ukusuka kwiziko lesixeko saseAngers ngemoto kunye ne-300m ukusuka eLoire.
Ligumbi lokulala elikumgangatho ophezulu elinendawo yokulala, indawo yokuhlambela, indawo yeofisi enekhompyuter esisigxina kunye nokufikelela kwi-intanethi yenethiwekhi kunye nendawo yokufunda. Kukho i-microwave kunye nomenzi wekofu, iketile kunye nefriji. Izindlu zangasese zikumgangatho ophantsi kwaye kwabelwana ngazo kunye neofisi (yabucala) esezantsi.
Igumbi lokulala lahlukile kwindlu engaphezulu kweofisi ehlala kuphela emini. Ungandicela neentsuku ezongezelelekileyo zeWeekend nokuba azikho kwikhalenda. Ukungathathi iindleko zokucoca ukuphepha ukunyusa ixabiso, enkosi ngokubuyisela igumbi njengoko ulifumene
1 ibhedi elala abantu ababini, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1
4.76 · Izimvo eziyi-279
ILa Pointe de Bouchemaine yindawo yokuhlala ebekwe kumda weConfluente de la Loire kunye neMaine kwaye yilali yeengcibi.
Sibekwe kwindawo ebizwa ngokuba yiwayini yaseSavennières kwaye sikwindlela yewayini. Hlala kakuhle
Umbuki zindwendwe ngu- Frederic
Ndingakubonisa iindlela zokunyuka intaba okanye ukubaleka kunye nolwazi malunga nento oyifunayo. Kodwa andizuhlala ndikwazi ukukunceda emini kuba ndinomsebenzi wam kwisiza nabathengi kuba ndiyiBioresonance therapist.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bouchemaine